Lixesha lokunyusa iRSS feed yakho kwabafileyo | Martech Zone
Ngokuchasene nenkolelo eninzi, feeds basajikeleza kobuso be-intanethi… okanye ubuncinci bayo. Umdibaniso womxholo unokugqitywa kukusetyenziswa kunye neewebhusayithi kunabantu abasebenzisa isifundi sokutya… kodwa ithuba lokuqinisekisa ukuba umxholo wakho usasazekile kwaye ujongeka umkhulu kwizixhobo zonke iseyinto yokudibanisa izicwangciso zomxholo.
Qaphela: Ukuba ulahlekile-nali inqaku yintoni i-RSS feed.
Ndothukile xa ndijonga iakhawunti yethu endala yeFeedburner ukubona ukuba kusekho abasebenzisi abangama-9,000 + ababebukela umxholo wethu ngokutya kwethu yonke imihla… wow! Kwaye xa ndiqala ukujonga ezinye iisayithi, zazinabafundi abangama-50,000 + kwezinye iibhloko. Nazi izinto ezimbalwa esizenzileyo ukuphakamisa ukondla kwe-RSS kwabafileyo sisebenzisa i-WordPress.
Qinisekisa ukuba unayo thumela izithonjana Kwindawo yakho kwaye ungeze ukumakisha okuyimfuneko ukuze amanqaku akho abe nomfanekiso obonakalayo. Oku kunokwenzeka ngeWordPress ngokusebenzisa i Iplagi ye-SB RSS feed Plus yeWordPress okanye ungabhala owakho umsebenzi.
Phunyezwa Isongezelelo Ukuze ukwazi ukulandela umkhondo kunye nokulinganisa ukutya okutyayo kunye nenqanaba lokucofa, unokwenza ngokwezifiso i-URL yakho yokondla, kwaye utyhale ukutya kwakho kumajelo akho asekuhlaleni.
Yongeza isibhengezo selungelo lokushicilela okanye ubize isenzo kwisiseko sokondla kwakho nge I-WordPress SEO iplagi. Sibamba abantu beba kwaye bephinda bashicilela ukutya kwethu ngalo lonke ixesha kwaye baba zizidenge ngokwaneleyo ukugcina ilungelo lethu lobunikazi xa bepapasha.
Yongeza idilesi yakho yokondla kwimenyu yakho kwaye uyibeke kwindawo ethile kwindawo yakho usebenzisa uphawu lwehlabathi lwe-RSS feeds.
Yongeza iithegi zentloko eziyimfuneko kumxholo wakho phakathi kweethegi zentloko ukuze usetyenziso kunye nezikhangeli zifumane idilesi yakho yokondla, nantsi ikhowudi kwidilesi yethu yokondla:
Bulala i-Feedburner kwaye uzise i-FeedPress kuBomi:
Simisele i-Feedburner kwaye sayisebenzisa Isongezelelo Kwindawo yethu. Yiplatifti ye-analytics ene-feed eneempawu ezithile ezongezelelekileyo ezinje ngokukwazi ukwenza i-CNAME isondlo sakho ukuze ungaxhomekeki kuloo mdala ukutya I-URL. Ke, ndinendawo engaphantsi https://feed.martech.zone Cwangcisa ukutya kwethu!
Nantsi indlela yokuguqula indawo yakho ibe Isongezelelo:
I-FeedPress inetoni yezinye iindlela zokwenza ngokwezifiso nokwandisa ukutya kwakho:
Ukupapashwa kweendaba zosasazo -I-FeedPress ikwanayo into engakholelekiyo ukudityaniswa kweendaba zosasazo apho unokushicilela ngokuzenzekelayo yonke imixholo esandula kupapashwa kuzo zonke iiakhawunti zakho zemidiya yoluntu.
Ukulandela umkhondo -Ingxelo ehambele phambili kunye nechanekileyo malunga nokuba bangaphi ababhalisile onabo, phi, kwaye njani abo babhalisile bakutya ukutya kwakho.
Incwadana ye-imeyile -Simahla kubabhalisi be-1000 okanye bambalwa. Nika amandla inqaku labo leendaba kwaye ubambe ikhowudi yefom yokubhalisa ukuyifaka kwindawo yakho.
Izaziso zePush -Izaziso ezisebenzayo zokutyhala ngePubSubHubbub ukwazisa ababhalisi bokutya ngomxholo wakho omtsha.
Umxholo ngokwezifiso -Yongeza isihloko kunye nelogo, unciphise umxholo wakho, uhlengahlengise okubhaliweyo ngakumbi, uhlengahlengise inani lamanqaku.
Isatifikethi esiKhuselekileyo Ukunyanzeliswa kwe-SSL ukukhulisa ukuhanjiswa.
Umdibaniso kaGoogle woHlaziyo -Ukulandelwa kwe-UTM okuzenzekelayo xa abafundi bokutya becofa kwindawo yakho.
Ezinye iifomathi Isondlo sakho singasetyenziswa kwiXML, JSON, okanye kwi-HTML.
Plugin WordPress -Ukuba ukwiWordPress, banikezela iplagi ukwenza izinto zibe lula ngakumbi!
Qaphela: ndibandakanye i-URL yokuhambelana nayo Isongezelelo -Kwaye ndicebisa iqonga le pro!
tags: enye intoisicelo rss xmlGuqula ukusuka kwi-feedburner iye kwi-feedpressifidii icon feedukutyangokutyaifidiithegi yokubhaliweyo eyintlokoungayongeza njani ilungelo lokushicilela kwi-feed yakhoindlela yokupapasha kwintlaloIsondlo sikaJsonrss feedi icon ye-rssrss kwintlaloI-rss xmlsb rss feed kunye ne-pluginWordPressiplagi yamagama
I-AeroLeads: Chonga iidilesi zePosi eziLindelweyo ngePlagi yeChannel